Eyona mveliso ye-Testosterone Isocapronate powder yomenzi
/ iimveliso / testosterone / I-Testosterone Isocapronate powder
Akukho kalo SKU: 15262-86-9. Udidi: testosterone
I-AASraw ngumvelisi oqeqeshiweyo weTestosterone Isocapronate powder ene-lab ezimeleyo kunye nefektri enkulu njengenkxaso, yonke imveliso iya kwenziwa phantsi kolawulo lweCGMP kunye nenkqubo yokulawula umgangatho elandelekayo. Inkqubo yokubonelela izinzile, zombini ii-odolo zokuthengisa kunye nee-wholesale zamkelekile.
Igama lemveliso: I-Testosterone Isocaproate powder
Inombolo ye-CAS: 15262-86-9
Isisindo somzimba: 386.576 g / mol
I-Testosterone Isocaproate yi-hormone ye-anabolic elawula ukuphuhliswa kwemisipha, amathambo, kunye nezitho zesini. Nangona ibalulekile ekukhuleni kwamadoda kunye neempawu ezininzi zobudoda, ikwafumaneka kumanqanaba asezantsi kakhulu kwabasetyhini. Amanqanaba e-testosterone ayanda ngexesha lokufikisa, emva koko aqale ukwehla emva kokuba emdala. I-Hypogonadism, okanye amanqanaba aphantsi kakhulu e-Testosterone, achaphazela amadoda ngokubanzi, kodwa abafazi banokubandezeleka kwimeko. I-Testosterone ephantsi idibaniswe nokunciphisa ubunzima be-muscle, i-libido ephantsi, kunye nomngcipheko omkhulu wesifo senhliziyo. Ngenxa yoko, kukho iinzuzo ezininzi zokunyusa i-Testosterone Isocaproate.
Phakathi kwemisebenzi yayo emininzi emzimbeni, i-Testosterone Isocaproate ivuselela ukuveliswa kweeseli ezibomvu zegazi, ezinceda ukubonelela nge-oksijini kwiimisipha kunye namalungu. Ngelixa iiseli ezibomvu zegazi ezininzi zinokubeka imingcipheko yazo, isixa esiphantsi ngokungaqhelekanga, okanye i-anemia, inokubangela ukonakala kwamalungu okanye ezinye iingxaki zempilo. Izifundo ziye zafumanisa ukuba unyango lwe-Testosterone Isocaproate lunokunceda ukulungisa i-anemia.
Unyango lwe-Testosterone Isocaproate olufana nokutshintshwa kwehomoni yendalo kwakhona kufunyaniswe ukonyusa ukuxinana kweeminerali zamathambo. Ukuxinana kwamathambo kuncipha kwiminyaka yobudala, kuphakamisa umngcipheko we-osteoporosis. Ukunyusa i-Testosterone Isocaproate yakho kunokomeleza amathambo akho, ekwabonelela ngesakhiwo kunye nokukhuselwa kwamalungu akho.
Kukho isizathu sokuba i-steroids ngokubanzi idume phakathi kweembaleki. I-Testosterone Isocaproate yi-steroid eyenzeka ngokwemvelo enokunyusa nokugcina ubunzima bemisipha. Emva koko, kukhokelela kumandla amaninzi kunye nokunciphisa ubunzima bamafutha. Ukuphumeza inkqubo yoqeqesho lwamandla rhoqo kunokuphucula ngakumbi izibonelelo, njengoko oku kunceda ukunyusa amanqanaba e-Testosterone ngokwemvelo. Oku kunegalelo kwimithambo enemveliso enokuthi ifumane inzuzo yezempilo.
Ubunzima bomzimba obunempilo kunye namanqanaba okuphucula amandla anokuba nefuthe elihle kwimpilo yakho yengqondo. I-Hypogonadism ngokuqhelekileyo ibonakala kukudinwa, ukulahlekelwa yi-libido, kunye neempawu zokudakumba okukhulu. Uphononongo lufumanise ukuba unyango lonyango lwe-Testosterone Isocaproate lunciphise ezi mpawu, kwaye lunokuba lunyango olusebenzayo lokudakumba.
Ukongeza kwimpilo yakho yengqondo kunye nomoya jikelele, i-Testosterone Isocaproate inokunceda ingqondo ngezinye iindlela. Izifundo zifumene ikhonkco phakathi kwamanqanaba aphezulu eTestosterone kunye nomngcipheko oncitshisiweyo wesifo se-Alzheimer. Uxinzelelo oluphezulu lwe-Testosterone Isocaproate lunokuthi lube negalelo ekuphuculeni inkumbulo kunye nomsebenzi wokuqonda, kubandakanywa nezakhono zendawo.
Nangona izifundo ziqhubeka, ubungqina bubonisa ukuba i-Testosterone Isocaproate inokunceda ukunyanga nokukhusela izifo ezithile ze-cardiovascular. Amanqanaba asezantsi e-Testosterone adityaniswa ngokubanzi kunye nomngcipheko omkhulu wesifo senhliziyo. Oku kungenxa yokuba ezinye izinto, ezifana nokukhuluphala, nazo zidibene namanqanaba aphantsi e-Testosterone. Nangona kunjalo, abaphandi ngoku bazama ukuqinisekisa imiphumo ye-Testosterone Isocaproate yonyango kwimpilo ye-cardiovascular health.
Nangona kukho inani leenzuzo zokunyusa i-Testosterone Isocaproate, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba i-dosage ikhuselekile ukuphepha nayiphi na imiphumo emibi. Ukongeza kwii-gels, ii-skin patches, kunye ne-injection, kukho inani le-Testosterone Isocaproate ephuculweyo ekhoyo, kubandakanywa ne-creatine supplements, engadingi i-prescription. Ukutya okuthile kunye neevithamini kunokukunceda ngokwendalo ukwandisa amanqanaba akho eTestosterone, kubandakanya ivithamin D, i-zinc, ityhuna, kunye namaqanda. Ngokuqhelekileyo, ukutya okunengqiqo kunye nomgaqo woqeqesho olusisiseko kunokukunceda ukukhulisa nokugcina inani eliphilileyo le-Testosterone Isocaproate. Nangona kunjalo, ukuba uyakrokrela i-hypogonadism, thetha nogqirha wakho malunga nonyango lwe-Testosterone Isocaproate.
Testosterone Isocaproate powder Izibonelelo
Amanqanaba aMandla aPhakamileyo
I-Testosterone Isocaproate yinto ebalulekileyo kumanqanaba amandla emihla ngemihla ngenxa yendima yayo ekuveliseni iiseli ezibomvu zegazi. Ezi seli zibalulekileyo zibonelela ngeoksijini emzimbeni kwaye zinceda ukuguqula amafutha kunye neecarbohydrates zibe amandla. Ngenxa yoko, amadoda ane-Testosterone ephantsi aphela ukufumana ukukhathala okugqithisileyo kwengqondo kunye nomzimba. Nangona ngamanye amaxesha unokuziva udiniwe ngenxa yosuku olunoxinzelelo okanye ukungabikho kokulala, kubalulekile ukuqaphela ukuba ukuba ufumana ukudinwa okungapheliyo ngoko amanqanaba asezantsi e-Testosterone anokuba netyala. Nangona kunjalo, unyango olutshintshileyo lunokubuyisela amanqanaba aphantsi kwisiqhelo, ukomeleza amandla kunye namandla. Umntu ufumana iziphumo ezinamandla, uya kuba uthi "ewe" kwiseshini yokuzilolonga okanye umjikelo wegalufa ngokukhawuleza!
Umnqweno weSondo owomeleziweyo kunye nokuSebenza
Ukuba ubufumana i-sex drive esezantsi kunesiqhelo, unokufuna ukujonga kunyango lokubuyisela i-Testosterone Isocaproate ukuze uphinde ufumane i-libido efanelekileyo. Amanqanaba asezantsi e-Testosterone anokwenza umonakalo kwimpilo yesondo yendoda, ekhokelela ekunciphiseni umnqweno kunye nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Uphononongo olufakwe kwi-Journal ye-Clinical Endocrinology & Metabolism, yafumanisa ukuba i-libido kunye namanqanaba e-Testosterone ahambelana kakhulu. Iziphumo zafumanisa ukuba izifundo ezichaza ukuba nomnqweno wesondo ophantsi babenethuba eliphezulu lokuba ne-Testosterone ephantsi. Xa amanqanaba aphantsi abuyiselwa kwisiqhelo, amadoda afumana umnqweno ophuculweyo wesondo kunye nomsebenzi, ovumela ukuba babuyisele ubomi babo bobulili kwindlela!
Ukomelela Kwezihlunu ezongeziweyo
Ukujonga ukwakha izihlunu kwaye ukrole umzimba wakho? Oko kunokuba yinto enzima ukuba uhlala ne-T ephantsi ye-T. Testosterone Isocaproate idlala indima enkulu kwi-protein ye-muscle synthesis, elungisa umonakalo we-muscle obangelwa ukuphakamisa ubunzima kunye nokuzivocavoca okukhokelela ekunyuseni kwemisipha. Olunye uphando olulinganisa umphumo we-Testosterone Isocaproate kumandla, lwafumanisa ukuba ubunzima be-muscle bunyuke ngomyinge we-20% kuzo zonke izifundo ezilithoba zovavanyo emva kokufumana iidosi zehomoni yamadoda. Xa kudityaniswa nokutya okufanelekileyo kunye nokuzivocavoca, unokulindela ukwakha imisipha enqabileyo emva kokubuyisela amanqanaba akho eTestosterone.
Ngaba ubusazi ukuba ukongeza kukuqina kwemisipha, iTestosterone Isocaproate inokunceda Ukulahlekelwa ngamatye? Ngokophononongo, amadoda anqongopheleyo kwi-Testosterone Isocaproate afumana unyango lokutshintsha anamava okuncitshiswa kwe-circumference yesinqe kunye ne-BMI. Oku kunokwenzeka ngenxa yokuba amadoda anobunzima bezihlunu ezandisiweyo kunye nezicubu zitshisa iikhalori ezininzi, naxa ziphumla.
Amadoda atyebe kakhulu okanye atyebe kakhulu kunokwenzeka ukuba abe namanqanaba asezantsi e-Testosterone kuba iiseli ezinamafutha zinokuguqula i-Testosterone Isocaproate ibe yi-estrogen (ihomoni yesini yabasetyhini). Ekubeni unomngcipheko ophezulu we-T ephantsi ukuba unobunzima obuphezulu, kukulungele ukufumana amanqanaba akho ahlolwe ukuze ubone ukuba i-Testosterone ephantsi yinto enegalelo.
Umsebenzi weNgqondo owongezelelweyo
I-Testosterone Isocaproate idlala indima enkulu ekusebenzeni kwengqondo. Ngokutsho kophando, ukutshintshwa kwe-Testosterone Isocaproate kubangele ukwanda komsebenzi wengqondo kwimimandla yeengcamango zemathematika, imemori yomlomo kunye nokugxininiswa. Ngaphezu koko, unyango lwe-Testosterone Isocaproate lubonakaliswe ukunciphisa umngcipheko wokukhula kwengqondo kunye nesifo se-Alzheimer kumadoda asele ekhulile. Ke ngoko, kubalulekile ukugcina amanqanaba akho eTestosterone ejongana nokukhusela impilo yakho yengqondo.
Uncedo lweStress kunye noPhuculo lweMood
Ngokuchasene nenkolelo eyaziwayo yokuba i-Testosterone Isocaproate yenza amadoda abe nobudlova kwaye abe nomsindo, ihomoni ngokwenene iphucula isimo sengqondo samadoda. Ngokutsho kophando lwezenzululwazi, kwagqitywa ukuba i-Testosterone Isocaproate yakhokelela ekuphuculeni iimvakalelo ezintle kunye nobuhlobo kunye nokunciphisa iimvakalelo zokucaphuka, uxinzelelo, umsindo kunye novalo. Kucingelwa ukuba unyango lokubuyisela i-Testosterone Isocaproate lunokusetyenziswa njengonyango lokuthomalalisa uxinezeleko lwamadoda.
Ukunciphisa uMngcipheko wokuhlaselwa yiNtliziyo, ukubetha, kunye nokufa
Ngaba uyazi ukuba i-Testosterone Isocaproate inokuphucula impilo yentliziyo kumadoda? Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iTestosterone Isocaproate idlala indima ebalulekileyo ekuvelisweni kweeseli ezibomvu zegazi. Amanqanaba aphantsi ala maseli abalulekileyo anokuchaphazela kakubi impilo ye-cardiovascular, ekhokelela ekunyuseni umngcipheko weemeko zempilo yentliziyo kunye nezifo ezifana nesifo senhliziyo kunye nesifo senhliziyo.
Ngethamsanqa, uphando lwezenzululwazi lubonise isithembiso ekunciphiseni lo mngcipheko usebenzisa i-Testosterone Isocaproate yonyango yokubuyisela ukubuyisela amanqanaba aphantsi kwisiqhelo. Enyanisweni, uphando lwe-European Heart Journal malunga nezigulane ze-83,000 zafumanisa ukuba amadoda ane-Testosterone ephantsi abuyiselwe ngokusebenzisa unyango lokutshintshwa kwe-Testosterone Isocaproate ayenomngcipheko ophantsi wokuhlaselwa yintliziyo, ukubetha, kunye nokufa xa kuthelekiswa namadoda angaphathwanga. Ukutshintsha amanqanaba aphantsi eTestosterone kuyimfuneko ukuze uphile ubomi obude nobunempilo.
Thenga Testosterone Isocaproate Umda
 Haynes WM, ed. (2011). I-CRC Handbook yeKhemistri kunye neFiziksi (i-92nd ed.). CRC Press. p. 3.304. I-ISBN 978-1439855119.
 Sapienza P, Zingales L, Maestripieri D (Septemba 2009). "Ukwahluka ngokwesini kwimingcipheko yezemali kunye nokukhetha umsebenzi kuchaphazeleka yi testosterone".
 Yintoni eKwalelweyo”. World Anti-Doping Agency. Igcinwe kweyoqobo ngoNovemba 12, 2020. Ibuyiselwe nge-18 kaJulayi 2021.
 Wright J, Ellis L, Beaver K (2009). Incwadi yolwaphulo-mthetho ehambelanayo. ISan Diego: Ushicilelo lwezeMfundo. iphepha 208–10. I-ISBN 978-0-12-373612-3.
 Dabbs M, Dabbs JM (2000). Amaqhawe, ama-rogues, kunye nabathandi: i-testosterone kunye nokuziphatha. ENew York: McGraw-Hill. I-ISBN 978-0-07-135739-5.